लेख, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
मलाई यो फिल्मको नाम याद छैन। म कथाकथा वा कलाकारहरूको नाम सम्झिन। तर मलाई एउटा खास दृश्य याद छ। नायक कैदीको युद्धको शिविरबाट भागेको थियो र सेनाको पछि-पछि खेद्दै नजिकैको गाउँमा भागेको थियो। जब ऊ एकदमै लुक्ने ठाउँ खोज्दै थियो, अन्तमा ऊ एउटा भीडभाडिएको थिएटरमा डुबे र त्यहाँ एउटा ठाउँ भेट्टायो। तर चाँडै ...
हाम्रा एक जना एल्डरले भर्खरै मलाई बताएका थिए कि २० बर्ष अघि उसले बप्तिस्मा लिएको मुख्य कारण यो हो कि उनी पवित्र आत्माको शक्ति पाउन चाहन्थे ताकि उनी आफ्ना सबै पापहरुमाथि विजय पाउन सकून्। उसको अभिप्राय राम्रो थियो, तर उसको बुझाइ केही हदसम्म त्रुटिपूर्ण थियो (निस्सन्देह, कसैलाई पनि पूर्ण समझ छैन, हामी हाम्रो असमझेलताको बाबजुद पनि परमेश्वरको अनुग्रहले मुक्ति पाउँछौं)। पवित्र आत्मा त्यस्तो चीज होइन जुन हामीले केवल "खोल्नुहोस्" ...
अधिकांश इसाईहरूले सुसमाचारमा विश्वास गर्दैनन् - उनीहरूले सोचे कि मुक्ति केवल त प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि कुनै व्यक्तिले विश्वास र नैतिक तवरमा सिद्ध जीवन मार्फत कमाउँछ भने। "तपाईले जीवनमा केहि पनि पाउनुहुन्न।" "यदि यो सत्य हुन निकै राम्रो लाग्छ भने, यो सायद सत्य नै हुँदैन।" जीवनका यी प्रख्यात तथ्यहरू बारम्बार व्यक्तिगत अनुभवहरूको माध्यमबाट हामी प्रत्येकमा टाँसिएका हुन्छन्। तर इसाई सन्देश यसको बिरूद्ध छ। त्यो ...
के तपाईंलाई थाहा छ परमेश्वरमा विश्वास गर्ने धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वर उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ? मानिसहरूलाई सृष्टिकर्ता र न्यायाधीशको रूपमा कल्पना गर्न मानिसहरूलाई सजिलो लाग्छ, तर भगवानलाई उनीहरूलाई गहिरो प्रेम गर्ने र हेरचाह गर्ने व्यक्तिको रूपमा देख्न गाह्रो छ। तर सत्य यो हो कि हाम्रो असीमित मायालु, सृजनात्मक, र सिद्ध भगवानले उहाँ विपरित कुनै पनि कुरा सिर्जना गर्नुहुन्न, जुन उहाँ आफैंको विपरित हो। सबै ...
बिली ग्राहमले प्रायः एक अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई येशूमा भएको छुटकारालाई स्वीकार्न प्रोत्साहित गरेको छ: उनले भने, "तिमी जस्तो छौ त्यस्तै आउनुहोस्!" यो एउटा सम्झौटो हो कि परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ: हाम्रो उत्तम र खराब र उसले अझै हामीलाई प्रेम गर्दछ। प्रेरित पावलका यी शब्दहरूको प्रतिबिम्ब हो, "जसरी तिमी पनि छौ त्यस्तै आउनु"। राम्रो ...
पवित्र आत्मा - कार्यक्षमता वा व्यक्तित्व?
पवित्र आत्मा अक्सर कार्यक्षमता को रूप मा वर्णन गरिएको छ, जस्तै ख। परमेश्वरको शक्ति वा उपस्थिति वा कार्य वा आवाज। यो दिमाग वर्णन गर्न को लागी एक उचित तरीका हो? येशूलाई परमेश्वरको शक्ति (फिल 4,13:१:2,20), परमेश्वरको उपस्थिति (गलाती २:२०), परमेश्वरको कार्य (यूहन्ना :5,19: १)) र परमेश्वरको आवाज (यूहन्ना :3,34:) पनि वर्णन गरिएको छ। तर हामी येशूको व्यक्तित्वको हिसाबले बोल्दछौं। पवित्र आत्माले पनि धर्मशास्त्र लेख्दछ ...
एक अभिव्यक्ति हामी सबै पहिले सुनेका छौं। अल्बर्ट स्वेइजरले “ख्रीष्टमा भएको” प्रेरित पावलको शिक्षाको मुख्य रहस्यको रूपमा वर्णन गरे। र अन्तमा स्वेइजरलाई थाहा हुनुपरेको थियो। एक प्रसिद्ध धर्मविद्, संगीतकार र महत्त्वपूर्ण मिशन डाक्टरको रूपमा, Alsatian २० औं शताब्दीका सबैभन्दा उल्लेखनीय जर्मनहरू मध्ये एक थियो। १ 20 1952२ मा उनलाई नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। १ 1931 in१ मा प्रकाशित उनकी द मिस्टिकिज्म अफ अपोस्टेल पॉल मा, स्वेइजरले मेटाए ...
के तपाईंले कहिल्यै आफूले चिनेको र सही शब्दहरू खोज्न संघर्ष गरेको कसैको वर्णन गर्नुपर्‍यो? यो मलाई पहिल्यै भइसक्यो र मलाई थाहा छ कि अरूले पनि त्यस्तै महसुस गरेका थिए। हामी सबै साथीहरू वा परिचित छौं जसको वर्णन शब्दहरूमा राख्न गाह्रो छ। येशूको त्यो समस्या थिएन। "जहिले तपाईं को हुनुहुन्छ?" भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन आउँदा पनि उहाँ सँधै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। मलाई विशेष रूपमा एक ठाउँ मनपर्छ जहाँ ऊ ...
ती 50० बर्ष भन्दा धेरैले निकिता ख्रुश्चेभलाई सम्झन्छन्। उनी एक र .्गीन, आँधीबेहरी चरित्र थिए जसले भूतपूर्व सोवियत संघका नेताको रूपमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा बोल्दा पोडियममा आफ्नो जुत्ता प्रहार गरे। उनी आफ्नो स्पष्टीकरणका लागि पनि परिचित थिए कि अन्तरिक्षमा पहिलो मानव रूसी कोस्मोनाउट युरी गागरिन "अन्तरिक्षमा उडे तर त्यहाँ कुनै भगवान देखेन"। गागारिन आफैंको लागि ...
Für uns als Christen ist der elementarste Glaubenssatz der, dass Gott existiert. Unter „Gott“ – ohne Artikel, ohne näheren Zusatz – verstehen wir den Gott der Bibel. Ein gutes und mächtiges Geistwesen, das alle Dinge geschaffen hat, dem an uns gelegen ist, dem an unserem Tun gelegen ist, das an und in unserem Leben handelt und uns eine Ewigkeit mit seiner Güte anbietet. In seiner Totalität ist Gott vom Menschen nicht verstehbar. Aber wir können einen Anfang machen:…
पवित्र आत्मामा परमेश्वरका गुणहरू छन्, परमेश्वर बराबर हुनुहुन्छ र कामहरू गर्नुहुन्छ जुन केवल परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरजस्तै पवित्र आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ - यति पवित्र छ कि परमेश्वरको पुत्रको जस्तो पवित्र आत्माको अपमान गर्न पापी छ (हिब्रू १०: २))। ईश्वरनिन्दा, पवित्र आत्माको विरुद्ध ईश्वरनिन्दा एउटा अक्षम्य पाप हो (मत्ती १२::10,29२)। यसको मतलब आत्मा स्वभावैले पवित्र हो र मन्दिरमा नभई यसलाई पवित्र मानिन्छ भनियो।
"के तिमी त्यो पढ्न सक्छौ?" पर्यटकले सोध्यो, ल्याटिन शिलालेखसहित ठूलो चाँदीको तारालाई औंल्याए: "हिक डे भर्जिन मारिया जीसस क्रिस्टस नाटस एस्ट।" "म कोशिश गर्नेछु," मैले जवाफ दिएर अनुवाद गरे, मेरो पातलो ल्याटिनको पूर्ण शक्ति बाहिर ल्याउँदै: "यहाँ येशू कुमारी मरियमबाट जन्मनुभएको थियो।" "ठिक छ, तिमीलाई के लाग्छ?" त्यस मानिसले सोध्यो। "के तपाईंलाई यस्तो लाग्छ?" यो मेरो पहिलो पवित्र भेट थियो ...
जहिले पनि विश्वासको प्रश्नको बारेमा छलफल हुन्छ, म छक्क पर्दछु किन यस्तो देखिन्छ कि विश्वासीहरू एक नराम्रो महसुस गर्छन्। विश्वासीहरूले उनीहरूको खण्डन गर्न सफल नभएसम्म नास्तिकहरूले कुनै न कुनै प्रमाण प्राप्त गरेको विश्वास गर्दछन्। अर्को तथ्यमा भन्ने हो भने, नास्तिकहरूले परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर प्रमाणित गर्न असम्भव छ। केवल विश्वासीहरूले परमेश्वरको अस्तित्वको नास्तिकहरूलाई विश्वास गर्दैनन् ...
हामी बौरिउठ्नुभएको मुक्तिदाताको पूजा गर्दछौं। यसको मतलब येशू बाँच्नुहुन्छ। तर ऊ कहाँ बस्छ? के उसको घर छ? घरबारविहीन आश्रयमा स्वयम्सेवा गर्ने भन्दा ऊ सडकमा बढी बस्न सक्छ। हुनसक्छ ऊ कुनाको ठूलो घरमा पालन पोषण गर्ने बच्चाहरू संग बस्छ। हुनसक्छ ऊ तपाईको घरमा पनि बस्छ - जसरी छिमेकीको घाँस काट्ने मानिस बिरामी पर्दा। येशूले तपाईंको लुगा लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, जस्तो कि तपाईं एक हुनुभयो ...
मानिसहरू कहिलेकाहिँ मुक्ति येशू ख्रीष्टमार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने इसाई शिक्षाको अपमान गर्दछन्। हाम्रो बहुलतावादी समाजमा सहिष्णुताको आशा गरिन्छ, हो, र धार्मिक स्वतन्त्रताको अवधारणा (जसले सबै धर्महरूलाई अनुमति दिन्छ) कहिलेकाँही यसरी गलत अर्थ लगाइन्छ कि सबै धर्महरू एकै समान सत्य छन्। सबै सडकहरूले एकै परमेश्वरतर्फ डो lead्याउँछन्, केही दावी गर्दछन्, मानौं ती सबै गएका थिए ...
कोरिन्थीहरूलाई लेखेको दोस्रो पत्रमा उनले आनन्दको अनमोल उपहारले विश्वासीहरूको जीवनलाई कसरी व्यावहारिक ढ affects्गमा प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा उत्कृष्ट विवरण दिए। "तर प्रिय भाइहरू, म्यासिडोनियाका समुदायहरूमा दिइने ईश्वरको अनुग्रह हामी तपाईंलाई चिनाउँछौं" (२ कोरिन्थी 2.१)। पावलले एउटा तुच्छ रिपोर्ट मात्र दिएनन - कोरिन्थका भाइबहिनीहरूलाई पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा थिस्सलोनिकाको मण्डलीले जस्तै गरी राख्न चाहन्थे ...
विश्वासको अर्थ "भरोसा" हो। हामी हाम्रो मुक्तिमा येशूमा पूर्ण भरोसा गर्न सक्छौं। नयाँ नियमले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि हामी जे गर्न सक्दछौं त्यसको आधारमा धर्मी ठहरिदैनौं, तर केवल परमेश्वरका पुत्र, ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर। प्रेरित पावलले लेखे: "यसकारण अब हामी विश्वास गर्दछौं कि मानिस व्यवस्थाको कामबिना विश्वासद्वारा मात्र हो" (रोमी :3,28:२)। मुक्ति हामीमा निर्भर हुँदैन।
अक्सर उहाँलाई चिन्ने कुरा हुन्छ। कसरी यो गर्ने, तथापि, केहि अनावश्यक र गाह्रो देखिन्छ। यो विशेष गरी यो हो कि हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौं र आमनेसामने कुरा गर्न सक्दैनौं। यो वास्तविक हो। तर यो न त दृश्यमान छ न हिजो देखिन्छ। सायद दुर्लभ अवसरहरूमा बाहेक हामी उहाँको आवाज पनि सुन्न सक्दैनौं। त्यसोभए हामी कसरी उहाँलाई चिन्ने? हालसालै एक भन्दा बढि ...
लरेन्स कोलबर्ग नामको मनोविज्ञानीले नैतिक तर्कको क्षेत्रमा परिपक्वता नाप्नको लागि बृहत् परीक्षणको विकास गर्‍यो। उनले निष्कर्ष निकाले कि सजायबाट बच्न राम्रो आचरण भनेको सही कुरा गर्नका लागि सबैभन्दा कम प्रेरणा हो। के हामी सजायबाट बच्नको लागि केवल हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्दैछौं? के यो इसाई पश्चात्ताप जस्तो देखिन्छ? के मसीहीधर्म नैतिक विकासको पछि लाग्नुको एक मात्र माध्यम हो? धेरै इसाईहरू ...
इसाई विश्वासले यो सन्देश घोषणा गर्दछ कि परमेश्वरको पुत्र समय मा एक पूर्व निर्धारित स्थान मा मासु भयो र हामी मानिसहरु बीच बाँचिरहेको। येशू व्यक्तित्वमा यति उल्लेखनीय हुनुहुन्थ्यो कि कसै कसैले उसको मानव भएको बारेमा समेत प्रश्न उठाए। यद्यपि बाइबलले बारम्बार यस कुरामा जोड दियो कि शरीरमा ईश्वर - महिलाबाट जन्मेको - वास्तवमा मानव हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले हाम्रो पापीपन बाहेक उहाँ सबै कुरामा हामीजस्तै हुनुहुन्थ्यो (जेएन १:१:1,14; गलती::;; फिल ...
भगवानको अनुग्रह - सत्य हुन पनि राम्रो छ?
यो सत्य हुन पनि राम्रो लाग्दछ, त्यसैले एक राम्रो कथन शुरू हुन्छ र तपाईंलाई थाहा छ कि यो सायद असम्भव छ। जे होस्, जब यो परमेश्वरको अनुग्रहको कुरा आउँछ, यो वास्तवमै सत्य हो। यद्यपि, केहि मानिसहरू जोड दिन्छन् कि अनुग्रह त्यस्तो हुन सक्दैन र कानूनको सहारा लिन्छन् जुन तिनीहरू पापको इजाजतपत्रको रूपमा हेर्दछन्। तपाईंको ईमान्दार तर गलत प्रयासहरू वैधानिकताको एक रूप हो जसले मानिसहरूलाई अनुग्रहको परिवर्तन गर्ने शक्ति दिन्छ ...